Financial Assistance in Somali | Continence Foundation of Australia
Financial Assistance in Somali
Dadka qaarkiis, waa lagama lagama maarmaan inay isticmaalaan qalabka celinta saxarada sida fayadhowr, kastuumo, kaadi celiye, boorsooyinka qaada kaadida ama qalabka sariirta lagu xafido si loo ilaaliyo xaalladeeda. Dadka qaarkiis, qalabka celinta saxarada ayaa laga yaabaa in loo baahdo mudada dheer. Sidaas darteed qiimaha qalabkani wuxuu noqdaa wax aad qaali u ah, oo saaraya cadaadis dhaqaalaha qofka.
Rugta caafimaadka ee qaabilsan celinta saxarada ama Khadka Caawimada Celinta Saxarada Qaranka ayaa ku siin karta faahfaahinta kuwa bixiya qalabka celinta saxarada. Waxay kaloo ku siin karaan macluumaad ku saabsan xaq u yeelashadaada mashruuca kharaj ku bixinta, kaas oo laga yaabo inuu ka caawimo macluumaadka kharajka joogtada ah iyo bedelida qalabka celinta saxarada.
Ogsoonow: Qiimaynta kalkaalisada La-talinta celinta saxarada ayaa lagu talinayaa si loo xaqiijiyo in adiga ama qofkaad daryeelaysaa ay isticmaalaan qalabka ugu fiican ee celinta saxarada sida le’ekaanshaha, iyo habka isticmaalka badeecada.
Waxaa jira kharaj lagu bixinayo mashruucyo lagu helli karo qalabka celinta saxarada oo ay kharajkiisa bixinayso Xukuumada Australia. Mashruucyadani waxay leeyihiin shuruuda kala duwan iyo siyaalla lacag loogu bixiyo, waana muhiim in la ogaado in aad adigu xaq u leedahay inaad dalbato kharaj u qoondaynta xukuumada adoo ku dalbanaya mashaariic kala duwan. Xukuumada Australia mashruucyadeeda kharajbixintu way u furan yihiin dhamaan muwaadiniinta reer Australia kuwaas oo buuxinaya shuruudaha, iyada oo aan ku xirnayn dawlad goboleedka ay kaga nool yihiin Australia.
Waxaa kale oo jira mashruucya kale oo xukuumada dawlad goboleedka/territoriga oo kala duwan oo la helli karo. Macluumaad intaas ka badan fadlan la xiriir Khadka Celinta Saxarada Qaranka oo ah 1800 33 00 66. Haddii aad qabto dhibaata luqadeed waxaad la xiriiri kartaa Khadka Caawimada ee adeega afcelinta telefoonka. Wac 131 450. Ugu horrayn, qof ayaa ku jawaabi doona Ingiriis, magacaw luqada aad ku hadasho ka dibna telefoonka ku sug. Waxaa lagugu xiri doona mutarjum ku hadla afkaaga, ka dibna u sheeg inaad doonayso inaad wacdo Khadka Celinta Saxarada Qaranka oo ah 1800 33 00 66. Ku sug telefoonka in lagugu xiro waxaana ku caawimi doona mutarjum si aad ula hadasho Lataliyaha Kalkaalisada caafimaadka. Adeegyada afcelinta telefoonka waxaa lagu bixiyaa lacag la’aan.